करिश्माको प्रश्न- यही प्रश्न ती पुरुषहरुसँग गर्नुहुन्छ ?
काठमाडौं, २७ भदौ । नेपाली चलचित्र उद्योगकी सदावहार अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले अन्तर्वार्ताको क्रममा प्रेमबारे सोधिने प्रश्नहरुको प्रतिप्रश्न गरेकी छिन् ।
‘तपाईं फलानोसँग प्रेममा हुनुहुन्थ्यो’ भनेर बारम्बार प्रश्न सोधिएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् यस्तो प्रतिप्रश्न गरेकी हुन् । ‘एउटा महिला कलाकार भएको नाताले मैले घरीघरी भोग्नु परेको एउटा बिषय के हो भने तपाई फलानोसँग प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो रे,’ उनले शनिबार फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘म जुन क्षेत्रमा काम गर्छु, त्यहाँ विभिन्न मानिसहरुसँग संगत हुन्छ, कतिसंग नजिक पनि भइन्छ ।’
उनले विवाह गर्ने उमेरको छोरी भइसक्दा पनि उही प्रश्न बारम्बार सामना गर्नुपर्दाको अवस्थाप्रति असहज महसुस गर्ने गरेको संकेत गरेकी छिन् । ‘यो उमेरसम्म आउपुग्दा पनि अन्तरवार्ताहरुमा त्यो एउटा प्रश्न जरुर आउँछ ! म एउटा विवाहित महिला हुँ । परिवारमा बस्छु । बिहे गर्ने उमेरको छोरी छ,’ करिश्माको प्रश्न छ, ‘अब यस्तो प्रश्नको के जवाफ दिऊँ ?’
उनले महिला भएकै कारणले बारम्बार यस्तो प्रश्नको सामना गर्नुपरेको संकेत गरेकी छिन् । उनको प्रश्न छ, ‘अनि त्यही प्रश्न ती पुरुषहरु जोसँग मेरो प्रेम सम्बन्ध भनिएको हुन्छ, ती मानिसहरुलाई चाहिँ त्यो प्रश्न सोधिएको पाउँदिन । किन रहेछ ?’
उनले अगाडि सोधेकी छिन्, ‘उनीहरु पुरुष भनेर आँट नगरेको होकी मलाई महिला भनेर हेपेको ? कमसेकम (करिश्मा पती) बिनोदजी र परिवारको त इज्जत गर्नुपर्ने जस्तो नि ! के दर्शकहरुलाई यस्तो प्रश्नको जवाफ सुनेर रमाइलो हुन्छ होला र ?’
अन्तिममा करिश्माको अपिल छ, ‘के बुझौं भने अहिलेको दर्शक श्रोता धेरै स्मार्ट हुनुहुन्छ, सबै कुरा बुझ्नु हुन्छ ।’
प्रमोद र सुजाताको ‘ओई कान्छी’ मा पल र पुजाको रोमान्स (भिडियोसहित)
पुष्प र दीपिका ‘कृष्ण लीला’मा
‘सत्यम’ लिएर आउँदै शंकर
सिनेमा हल सञ्चालनलाई सजिलो बनाउँदै चीन
सिटी एक्स्प्रेसद्वारा ‘गल्बन्दी टिकटक च्यालेन्ज’
राष्ट्रकविको गीतमा प्रविन र रचनाको स्वर (भिडियोसहित)
स्वस्थ जीवनका लागि सधैं गहुँत पिउँछन् अक्षय कुमार
बलिउड नायिका कंगनाको अफिसमा डोजर चल्यो
रहेनन् तेलुगुका चर्चित कलाकार जयप्रकाश रेड्डी
रहेनन् द्वन्द्व कलाकार सुरेश सिंह पुजारी
‘व्ल्याक प्यान्थर’ बाट चर्चित अभिनेता बोसम्यानको निधन
लकडाउनमा नेपाली नायिकाहरुः कोही व्यस्त, कोही अस्तव्यस्त र विवादमा
सज्जा चौलागाईं बनिन् तेस्रो सिजनको नेपाल आइडल विजेता
नेता वामदेव गौतमको ‘यो बुद्धभूमि’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)